Xinhua Myanmar - ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီချက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြန်လည်ပါဝင်ရန် ဘိုင်ဒန် လက်မှတ်ရေးထိုး
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ၄၆ ယောက်မြောက်သမ္မတအဖြစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်၌ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီးနောက် ဂျိုးဘိုင်ဒန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ် (ဆင်ဟွာ) North America
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ၄၆ ယောက်မြောက်သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး နာရီပိုင်းအကြာတွင် အမေရိကန်အား ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီချက်တွင် ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ရေး သမ္မတအမိန့်တစ်ရပ်ကို ဘဲဥပုံရုံးခန်း၌ ဘိုင်ဒန်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ၄၆ ယောက်မြောက်သမ္မတအဖြစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်၌ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီးနောက် ဂျိုးဘိုင်ဒန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ကျွန်တော်တို့ အခုအချိန်အထိ မလုပ်ဆောင်ရသေးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တိုက်ဖျက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက လက်မှတ်မရေးထိုးခင် ပြောကြားခဲ့သည်။အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်မည့် အမေရိကန် အစိုးရအသစ်၏ကြေညာချက်သစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ်က ကြိုဆိုကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီမှုကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့နဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတွေ မြို့တော်တွေ ပြည်နယ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ချိတ်ဆက်ဖို့ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ ခြေလှမ်းကို ကျွန်တော် နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုပါတယ်” ဟု ဂူတာရက်စ်က ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘိုင်ဒန်က သမ္မတရာထူး တာဝန်ယူသည့် ပထမဆုံးနေ့တွင်ပင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီမှု ကို ပြန်လည်ပါဝင်ရန် ကတိပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ယနေ့မှာ ထရမ့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ ရာသီဥတုပြောင်း လဲမှုဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီမှုကို တရားဝင်နုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အတိအကျဆိုရရင် ရက်ပေါင်း ၇၇ ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ ဘိုင်ဒန်ရဲ့ အစိုးရက ပြန်လည်ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပဲရစ်သဘောတူစာချုပ်ကနေ တရားဝင်နုတ်ထွက်ခဲ့သည့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က တွစ်တာတွင် ဘိုင်ဒန်က ရေးသားခဲ့သည်။
အဆိုပါသဘောတူစာချုပ်သည် အမေရိကန်၏ စီးပွားရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟု အလေးပေးပြောဆိုကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သမ္မတတာဝန်များ ရယူပြီးမကြာခင် သဘောတူညီမှုမှ နုတ်ထွက်ကြောင်း ထရမ့်က ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကိစ္စသည် ၎င်း၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွင် အရေးပါသောကိစ္စအဖြစ် ညွှန်ပြပြောဆိုကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဂျွန်ကယ်ရီကို ၎င်း၏ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် ဘိုင်ဒန်က ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြေရှင်းရန် ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများ လျှော့ချရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဆင့် သတ်မှတ်ချက် အထက် ပျှမ်းမျှအပူချိန် ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် မပိုရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ထိန်းထားရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီမှုကို အချိန်အတော်ကြာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုက သဘောတူညီခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
The Paris Agreement of climate change, agreed on by almost every country in the world in 2015 after lengthy negotiations, aims to tackle climate change by cutting greenhouse gas emissions and setsaglobal target of keeping the rise in the average temperature no higher than2degrees Celsius above pre-industrial levels. ■
၁- U.S. President Joe Biden delivers his inaugural address after he was sworn in as the 46th president of the United States in Washington, D.C., the United States, on Jan. 20, 2021. (Xinhua/Liu Jie)
၂- U.S. President Joe Biden (Front) delivers his inaugural address after he was sworn in as the 46th president of the United States in Washington, D.C., the United States, on Jan. 20, 2021. (Xinhua/Liu Jie)
Previous Article ဘိုင်ဒန်အစိုးရက အမေရိကန်-အာဖဂန် တာလီဘန် သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်
Next Article COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ရေးစိန်ခေါ်မှုဆိုင်ရာ သမ္မတအမိန့်ကို ဘိုင်ဒန် လက်မှတ်ရေးထိုး